Prof. Jawaari oo fariin u diray musharixiinta doorashada xilka madaxweynaha (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Prof. Jawaari oo fariin u diray musharixiinta doorashada xilka madaxweynaha (DHAGEYSO)
Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa fariin culus u diray musharixiinta dhawaan u tartameeysa xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Prof. Jawaari ayaa musharixiintaasi ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kula xiriiraan guddiga doorashada madaxweynaha oo xaruntooda tahay Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho, si ay uga qaataan wixii macluumaad ah ee looga baahan yahay.
“Waxaan ka codanayaaa dhamaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee isku soo taagay inay ka mid noqdaan musharixiinta xilka madaxweynaha Soomaaliyeed, inay la xiriiraan guddiga doorashada madaxweynaha oo xaruntooda tahay Villa Hargeysa, wixii macluumaad ah oo ay u baahdaan ka qaataan islamarkaana ilaaliyaan jadwalka doorasho” Sidaas waxaa yiri Prof. Jawaari.
Dhinaca kale, Prof. Jawaari ayaa ugu baaqay dhamaan musharixiintaas inay si fiican u aqriyaan shuruudaha ku qoran xeer-hoosaadka loo qeybiyay islamarkaana ilaaliyaan jadwalka doorashada ee madaxweynaha Soomaaliya.
“Sidoo kale, waxaa musharixiinta xilka madaxweyne ugu baaqayaa inay si fiican u aqriyaan xeer-hoosaadka loo qeybiyay, islamarkaana shuruudaha ku qoran ay sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo buuxiyaan, iyagoona kadib codsiyadooda ku gudbinaya maalmaha la qorsheeyay” Ayuu Prof. Jawaari hadalkiisa kusoo gaba-gabeeyay.